Induction cooktop FAQ - iZhongshan Amor Electrical Appliance Co, Ltd.
1.Ingabe abapheki bokungeniswa bapheka ngokushesha kunabapheki abajwayelekile bakagesi nabagesi?
Yebo, umpheki wokungeniswa uyashesha kunompheki wendabuko kanye nogesi wokupheka. Ivumela ukulawula okusheshayo kwamandla okupheka okufana nokushisa kwegesi. Ezinye izindlela zokupheka zisebenzisa amalangabi noma izakhi zokushisa ezishisayo kodwa ukufudumeza kokungenisa kushisa imbiza kuphela.
Ukupheka kokungeniswa kuzokwenza ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu?
Cha, i-induction cooker idlulisa amandla kagesi ngokufakwa kusuka kwekhoyili yocingo lapho ugesi ugeleza ngayo. Okwamanje kwakha amandla kazibuthe aguqukayo futhi kukhiqiza ukushisa. Ibhodwe liyashisa futhi lishisa okuqukethwe kwalo ngokuqhuba ukushisa. Indawo yokupheka yenziwe ngento eyenziwe ngengilazi-ceramic eyi-conductor engashisi kahle, ngakho-ke ukushisa okuncane kuphela okulahlekile ngaphansi kwebhodwe okwenze ukumoshwa kwamandla amancane uma kuqhathaniswa nokupheka kwelangabi okuvulekile kanye nendawo yokupheka ejwayelekile kagesi. Umphumela wokungeniswa awushisi umoya ozungeze umkhumbi, okuholela ekusebenzeni kwamandla okwengeziwe.
3. Ingabe bukhona ubungozi bezempilo obuvela emisebeni ye-induction?
Ama-cooktops wokungeniswa khiqiza imisebe ephansi kakhulu, efana nemvamisa yomsakazo we-microwave. Lolu hlobo lwemisebe luyehla lube yize emabangeni amasentimitha ambalwa luye cishe kunyawo ukusuka emthonjeni. Ngesikhathi sokusetshenziswa okujwayelekile, ngeke usondele ngokwanele kuphiko lokungeniswa kokusebenza ukuze unciphise imisebe.
Ukupheka kokungeniswa kudinga amasu akhethekile?
I-induction cooker ingumthombo nje wokushisa, ngakho-ke, ukupheka nge-induction cooker akunomehluko kunoma yiluphi uhlobo lokushisa. Kodwa-ke, ukufudumeza kushesha kakhulu ngombheki wokupheka.
5. Akuyona ingilazi yendawo yokupheka? Ngabe iyoqhekeka?
Indawo yokupheka yenziwe ngengilazi ye-ceramic, eqinile kakhulu futhi ibekezelela amazinga okushisa aphezulu kakhulu nezinguquko zokushisa okungazelelwe. Ingilazi ye-Ceramic inzima kakhulu, kepha uma ulahla into esindayo yama-cookware, ingahle iqhekeke. Ekusetshenzisweni kwansuku zonke, noma kunjalo, akunakwenzeka ukuthi kuqhekeke.
6.Ngabe kuphephile ukusebenzisa i-induction cooker?
Yebo, i-induction cooker iphephe ukusetshenziswa kunabapheki abajwayelekile ngoba awekho amalangabi avulekile nezifudumezi zikagesi. Imijikelezo yokupheka ingasethwa ngobude besikhathi nokupheka okudingekayo, izocima ngokuzenzakalela ngemuva kokuthi umjikelezo wokupheka usuqediwe ukugwema ukudla okuphekwe ngokweqile nobungozi bokulimaza umpheki.
wonke amamodeli afana nokuhlinzeka ngemisebenzi yokupheka okuzenzakalelayo yokupheka okulula nokuphephile. Ngokusebenza okujwayelekile, indawo yokupheka ihlala ipholile ngokwanele ukuthi ingathintwa ngaphandle kokulimala ngemuva kokuthi isitsha sokupheka sisusiwe.
7.Ngabe ngidinga i-cookware ekhethekile yokupheka kokungeniswa?
Yebo, i-cookware ingaphatha uphawu olukhomba ukuthi luyahambisana nendawo yokupheka yokungeniswa. Amapani wensimbi angenazinsimbi azosebenza endaweni yokupheka yokungeniswa uma isisekelo sepani siyibanga lensimbi elingenalutho. Uma uzibuthe unamathela kahle ematheni epani, uzosebenza endaweni yokupheka yokwenziwa.